Madaxweynaha Galmudug oo ka qeyb-galay kulan looga hadlayay qoondada haweenka ay ku yeelanayaan Baarlamaanka – Kalfadhi
Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, ayaa shalay magaalada Mogadishu kulan kula yeeshay kooxda #LeadNow oo ah, dumar isku tegay oo si gaar ah ugu ololeeya ka qeyb-galka haweenka arrimaha siyaasadda.
Kulanka waxaa si gaar ah looga hadlay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee 30% ee doorashada labada aqal ee Baarlamaanka 2021.
Mudane Qoor-Qoor, ayaa muujiyay in maamulkiisa uu diyaar u yahay xaqiijinta qoondada haweenka, waxaana uu rajeeyay in maamuladda kalena uu sidaasi oo kale rajeynayo. Dhinaca kale waxaa uu xusay in marnaba aan la qarin karin doorka haweenka ee siyaasadda Soomaaliya.
Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo soo saaray war-saxaafadeed ay uga hadleen xaaladda siyaasada ee dalka Soomaaliya, ayaa ku booriyay madaxda Soomaaliyeed inay ixtiraamaan oo ay si buuxda u hirgeliyaan qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 ku yeelanayaan baarlamaanka, sidii ay ugu ballanqaadeen heshiiska 17kii Sebtember.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo Golaha Wasiirrada uga warbixiyay arrimaha doorashooyinka heer-federaal